यी चार राशि भएका व्यक्तिले कमाउँछन् टन्नै सम्पति ! हेर्नुस् कतै तपाइँको पर्यो कि ? – Khabaarpati
October 18, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on यी चार राशि भएका व्यक्तिले कमाउँछन् टन्नै सम्पति ! हेर्नुस् कतै तपाइँको पर्यो कि ?
फलफूल किन्न पसल पुग्दा बाँदर पसले बनेर फलफूल दिन थालेपछि…(भिडियोसहित)
१८ बर्षकि नर्स छोरीलाई सकेको हो भन्दै बुबा आए मिडियामा ,४ जन केटाहरले बोकेर लगेछन, कसरि भिज्यो बिस्तार ? (भिडियो) June 13, 2021
कति राम्रो ज्ञानेन्द्रको मन, अन्ततः सबैलाई दिए माफी (भिडियो सहित) June 13, 2021
बिहे गरेको २७ दिनमा आमालाई अन्तिम फोन गर्दै, बिनिताले छोडिन संसार (भिडियोसहित) June 13, 2021